Fantaro i Mazhun Idris, hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ho an’ny herinandro 14-20 Aogositra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2019 2:29 GMT
Sary natolotr'i Mazhun Idris.
Amin'izao taona 2019 izao izay ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fahamaroam-piteny an-tserasera, hifandimby ireo Afrikana mpikatroky ny teny sy mpanandrateny hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny Afrikana. Ny lahatsoratra etoana dia momba an'i Mazhun Idris (@HausaTranslator) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro hitantanany ny kaonty.
Matihanina miasa tena momba ny fametrahana fangitra, sosiolinguiste ary mpandalina ny fikarohana anaty tranonkala aho, efa ho dimy ambinifolo taona mahery izao no nanaovako izany. Sady mpandraharaha aho no mpahay momba ny teny mirotsaka miasa an-tsitrapo miaraka amin'ireo fikambanana media sy teknolojika marobe. Mpanoratra aminà tenimpirenena roa aho no sady toniandahatsoratra, izay mamoaka vokapikarohana akademika momba ny fitsipipanoratana ny teny Hausa sy ireo habaky ny media sosialy Nizeriàna. Manana diplaoma momba ny toekarena sy maripahaizana amin'ny fahafehezana ny fiteny Hausa sy Arabo, teny am-piandohana aho dia tale mpanatanteraka tao aminà orinasa iray mpamokatra sarimihetsika tao Nizerà. Efa nanao ny asan'ny mpanaramaso sy manampahaizana manokana momba ny fampivadiana ny kolontsaina ho amin'ny resaka famarotana votoaty, sy dokambarotra, TV, fandaharana alefa amin'ny onjampeo ary ireo bilaogy anaty media sosialy. Indray mandeha aho no efa nisahana ny maha Mpanolotsaina Nasionaly ho an'ny Tetikasa CIRF an'ny Ivontoerana Zephyr ao Washington DC, toerana izay nanoroako hevitra ny hanaovana fandresena lahatra momba ny fahalalahana ara-pivavahana ety anaty tambajotra nikendrena ireo mpiteny ny fiteny Hausa any Afrika Andrefana, ary nitantana nandritry ny taona iray ireo fantsona media sosialy amin'ny fiteny Hausa tao amin'ilay tetikasa. Mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ireo Amerikàna Mpandika, sy ny Ivontoerana ao Nizerià ho an'ireo Mpandika teny sy Lahatsoratra.
ANTOTAN-KEVITRA AKADEMIKA: https://independent.academia.edu/MazhunIdris
RV: Ahoana ny toerana misy ny fiteninao ety anaty sy ivelan'ny aterineto?
Noho izy ampiasaina any aminà firenena ampolony mahery dia betsaka ny fifantohana azon'ny fiteny Hausa, betsaka ny isan'ireo mpampiasa Hausa eny anaty sehatra nomerika toy ny bilaogim-baovao sy media sosialy, ary ny fifandirana misy amin'izao fotoana izao any amin'ireo ampahantany miteny sy mampiasa ny Hausa. Misy tetikasa samihafa momba ny fiteny Hausa ka tafiditra amin'izany ireo orinasa nomerika goavana toy ny Facebook, Nokia, ary Amazon. Ireto manaraka ireto ny vitsivitsy amin'ireo fikambanana nihaonako momba ny fiteny sy ny kolontsaina Hausa: ny Datamundi – Neerlinter, Appen Global – Australia, Visual Data Media Services – Hollywood, USAID/Breakthrough ACTION Nigeria, ary ny What3words.com – London.
RV: Mikasika lohahevitra inona no kasainao hifantohana mandritra ny herinandro izay hitantananao ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ?
fampahafantarana momba ireo antontan-kevitra akademika mahakasika ny Academia (ny momba ny fiteny ankapobeny sy ny Hausa )
Ireo loharano ety anaty tambajotra ho an'ny teny afrikàna (Hausa sy ny maro hafa)
Rohy mankany amin'ireo fifanakalozan-dresaka Twitter momba ny fiteny afrikàna, adihevitra, ary lesona.
Tantara, ohabolana, habobo
Mba ho ananan'ny fiteny Hausa ety anaty tambajotra ny endrika matanjaka sy ireo fitaovana fandikana teny anaty serasera, ny rakibolana nomerika ary ireo fampiasa fametrahana fangitra amin'ny toerana.